28 Maalmood: Maalinta 3aad – Akhbaarta Wanaagsan
Posted on June 12, 2020 June 12, 2020 by Maroodiga
MAALINTA 3-AAD: Akhri Matayos cutubka saddexaad.
Yooxanaa Baabtiisahii (kan ha ku khaldin rasuul Yooxanaa oo qoray Injiilka afraad) wuxuu garanayey shaqadii noloshiisa: “Jidka Rabbiga hagaajiya, waddooyinkiisa toosiya!” (aayadda 3) Waayadii hore marka uu boqor u imaanayo inuu dadkiisa soo booqdo, shaqaalaha ayaa jidka hagaajin jirey, oo godadka buuxin jirey oo meelaha taagga ahna simi jirey. Yooxanaa sidaas oo kale ayuu ku wacdiyey. Wuxuu isagu dadka ku caawinayey inay noloshooda toosiyaan si ay boqorka u soo dhoweeyaan, waa Ciise Masiix e.
Yooxanaa wuxuu ku wacdiyey akhbaar sahlan, “Toobadkeena, waayo, boqortooyadii jannadu waa dhow dahay.” (aayadda 2) Toobadkeenka macnihiisu waa inaad beddeshid meesha noloshaadu ku socoto, oo sharka ka leexatid, oo aad u noolaatid sida uu Ilaahay kuugu yeedhay inaad u noolaatid. Kuwo badan ayaa Yooxanaa maqlay. Dembiyadoodii ayay qirteen oo waxaa iyaga lagu baabtiisay webi Urdun, iyagoo aaminsan inuu Ilaahay u dembidhaafi dooney.
Yooxanaa wuxuu sidoo kale caddeeyey inaanay ku fillayn inaad sheegtid uun inaad ka xun tahay khaladkii aad gashay. Waxaad kaloo adigu u baahan tahay inaad bilowdid inaad waxa saxda ama quman samaysid. Waxaa kale oo uu isagu yidhi, “Haddaba midho toobad istaahila soo bixiya.” (aayadda 8) Noloshaadu waxay tusi doontaa isbeddelka qalbigaaga ka dhacay.
Yooxanaa islama weyneyn. Markii uu isagu is barbardhigay boqorkii imaanayey, wuxuu yidhi, “Kan aanan istaahilin inaan kabihiisa u qaado.” (aayadda 11) Isagu wuu ogaa in shaqadiisu diyaargarow u ahayd shaqada ka weyn ee uu boqorku qaban dooney.
Boqorku “Wuxuu idinku baabtiisi doonaa Ruuxa Quduuska ah iyo dab.” (aayadda 11) Tani waxay ku saabsan tahay imaanshaha Ilaahay hortiisa inuu innaga ina dhex dego, oo qalbiyadeena ka shaqeeyo, isaga oo ina beddelaya, sida dab dahabka ama lacagta ka saaraya ama ka shiilaya waxyaalaha wasakhda ah ee ku dhex jira. Haddii ay adag tahay in la toobadkeeno, way ka sii adag tahay in la sii wado waxa saxda ah. Waxaynu u baahanahay caawimaad khaas ah si aynu wadada saxda ah ugu joogno. Ruuxa Ilaahay ayaa inagu xooggeynaya inaynu sidaas samayno. Boqorka ayaa ballanqaadaya inuu kuwa isaga rumaysan u soo diro Ruuxa Ilaahay.
Ciise ayaa u yimid Yooxanaa. Isagu dembi kiisa ah oo uu ka toobadkeeno muu lahayn; noloshiisu gebi ahaanteedba daahir bay ahayd—taas oo uu mid kasta oo kale kaga duwanaa. Yooxanaa tan wuu ogaadey oo muu arkin sabab uu isaga u baabtiiso, laakiinse Ciise ayaa ku adkaystay inay taasi ahayd sida saxda ah ee ay ahayd in la sameeyo. Markii uu Ciise biyihii ka soo baxay, samooyinkii ayaa furmay, oo Ruuxii Ilaahay ayaa soo degey si uu u barakeeyo oo Ciise ugu xooggeeyo shaqadiisii. Ilaahay ayaa samada ka hadlay oo yidhi, “Kanu waa Wiilkayga aan jeclahay, oo aan ku faraxsanahay.” (aayadda 17) Erayadani waxay innaga ina xasuusinayaan waxa uu Ilaahay boqor ku odhanayo ee aan ka akhrino Sabuurradii 2:7 markii isaga la caleemo-saarayey “Adigu waxaad tahay wiilkayga, maantaan ku dhalay.” Baabtiisankii Ciise ma ahayn toobadkeenid. Isagu dhammaan kuwa kale wuu ka duwanaa. Taasi waxay ahayd caleemo-saarid, taas oo loo doortay ama isaga gaar looga dhigay shaqadiisii ahayd boqorkii Israa’iil iyo Masiixoodii.
Aayad ay tahay in la xasuusto —“Toobadkeena, waayo, boqortooyadii jannadu waa dhow dahay.” (Matayos 3:2)
Duco —Rabbiyow, ma sahlana in la toobadkeeno. Mararka qaarkood waxaan anigu jecelahay inaan khalad sameeyo. Sidaas oo ay tahay waan garanayaa inaad adigu og tahay waxa aniga ii wanaagsan. Fadlan igu caawi Ruuxaaga inaan sharka ka soo jeesto oo aan barto inaan jidadkaaga jeclaado. Igu caawi inaan farxaddayda ka helo waddada toosan ee adiga kuu timaada. Aamiin.
Posted in 28 days with Matthew, Lectures
1 thought on “28 Maalmood: Maalinta 3aad”
2021 filmler November 1, 2021 Reply
The symbols stopping on aon the particular pay line decides the win of a playera new playera gamblera persona gamera farmer. Iris Cecilius Serene